स्वावलम्बन लघुवित्तको संस्थापक सेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » स्वावलम्बन लघुवित्तको संस्थापक सेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहको ३ लाख २ हजार ४१६ कित्ता सेयर लिलामी भर्ने बुधबार अन्तिम दिन रहेको छ । यो सेयरको न्यूनतम मूल्य ७२८ रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम ७२८ रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ बोलकबोल गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।
आवेदन फारम बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, कमलपोखरी काठमाडौंमा पाइनेछ । न्यूनतम १०० कितादेखि अधिकतम ३ लाख २ हजार ४१६ कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पनि बोलपत्र भर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताले आवेदन फारममा डिम्याट खाता नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।